FIATREHANA NY “CORONAVIRUS” : Mihatra ny hamehana ara-pahasalamana ho an’i Madagasikara
Nisy ny fihaonana mivantana niarahan’ny Filoham-pirenena tamin’ireo filohana andrim-panjakana telo tonta eto amin’ny Firenena dia : ny filohan’ny Antenimieram-pirenena, ny filohan’ny Antenimieran-doholona ary ny filohan’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana. 23 mars 2020
Taorian’izay navoaka ofisialy tao anatin’ny tatitry ny filan-kevitry ny Minisitra manokana izay natao ny 21 marsa lasa teo fa mipetraka eto amin’ny tanin’ny Repoblikan’i Madagasikara ny fahamehana ara-pahasalamana na ny “état d’urgence sanitaire” nanomboka ny sabotsy 21 marsa 2020 ary mihatra avy hatrany izany mandritra ny 15 andro. Noraisina izany noho ny antony ara-pahasalamana noho ny fisian’ny toe-javatra goavana mampisahotaka ny fiainam-bahoaka, mba hampizotra ara-dalàna ny asan’ireo andrim-panjakana. Misy ireo didim-panjakana noraisina mifandraika amin’izay voalazan’ny Lalàmpanorenana noentina namaritra an’io fanapahan-kevitra io.
Didim-panjakana izay mifehy ny fampiharana rehetra araka ny voafaritry ny fehezan-dalàna mahakasika ny vanim-potoana manokana na “situation d’exception”. Ho fampiharana ny andininy faja-18 ao amin’ny lalàna faha 91-011 tamin’ny 18 jolay 1991 mikasika ny vanim-potoana manokana izay mamaritra ny fahefan’ny Filoham-pirenena amin’ny fampiharana ny fanaraha-maso ny fivezivezen’ ny olona sy ny fiara, ny fanaraha-maso ny famatsiana rehetra ary ny fanaraha-maso ny fitaovam-piadiana dia natolotra ny Praiminisitra ny fanatanterahana izany.
Nofaritana tao anatin’ny tatitr’ity filan-kevitry ny Minisitra manokana ity ireo Minisitra sy Minisitera voakasika manokana ao anatin’izao hamehana atrehin’i Madagasikara izao. Marihina fa efa anisany ireo fepetra noraisina mifandraika amin’izany toy ny fampiatoana an’ireo fivavahana isan-tokony any amin’ireo trano fiangonana na trano fivoriana samihafa, ny fanakatonana ny trano fianarana sy ny fanafoanana an’ireo kazaram-pivoriana maro samy hafa.